Owesifazane ubelethele e-toilet amanesi engamsizi | News24
Owesifazane ubelethele e-toilet amanesi engamsizi
Johannesburg - Owesifazane obesezinhlungwini esikwa ucele usizo kwabezimpilo, kodwa kuthiwa utshelwe ukuthi uyazenzisa akasikwa.
Ngenxa yezinhlungu ezimangalisayo, uqonde endlini yangasese, kungekho muntu nakuba amanesi ebeseduzane, wafike babelethela khona.
Lezi yizinsolo zobudedengu ezenzeke esikhungweni sezempilo eMpumalanga okumanje ziphenywa uMnyango wezeMpilo kulesi sifundazwe.
Funda nalolu daba: Izigebengu zikhale zemuka nezevatho
Izisebenzi zaseMatsula Clinic kuthiwa zinqabile ukusiza owesifazane obekhulelwe obatshele ukuthi uyasikwa.
UNgqongqoshe woMnyango wezeMpilo, uGillion Mashego, uzwakalise ukwethuka ngalolu daba wathi sebejube ithimba elizokwenza uphenyo.